Orinasa sy mpanamboatra China Ethyl Ethanol | Zhongrong
Anarana: etanol anhydrous, alikaola tsy misy rano
Fomban'ny molekiola: CH3CH2OH ， C2H5OH
Brand: Teknolojia Zhongrong
CAS tsia. : 64-17-5
Milanja molekular: 46.06840
hakitroky: 0,789 g / mL (20 ℃)
Famaritana ny vokatra: Kilasy ambony / GB / T678-2002
Famaritana fonosana: barika / betsaka (taonina)
Ny Ethanol dia manana Fampiasana maro. Voalohany indrindra, ny etanol dia solvent organika manan-danja, be mpampiasa amin'ny fanafody, loko, vokatra fidiovana, tarehy, menaka ary saha hafa.
Faharoa, ny etanol dia zava-dehibe amin'ny akora simika fototra, izay ampiasaina amin'ny famokarana acetaldehyde, ethylamine, ethyl acetate, acetic acetate, sns., Ary ahazoana fanafody mpanelanelana, loko, loko, ranomanitra, fingotra synthetic, detergent, pestiside ary zavatra hafa Ny vokatra fahatelo, ny vahaolana etanol 75% manana rano mahery dia manana otrikaretina bakteria mahery ary famonoana otrikaina ampiasaina matetika amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana. Tamin'ny taona 2017, ny minisitera sy ny kaomisiona isan-karazany any Shina dia namoaka politika mifandraika amin'izany hampiroboroboana ny fampiasana lasantsy lasantsy ampiasain'ny etanôlan'ny firenena amin'ny faran'ny taona 2020.
Alamino ny famokarana mifanaraka amin'ny fenitry ny orinasa "Anhydrous ethanol (Q / RJDRJ 03-2012)".
Previous: 150 sotro Alkoholika / Hyamine
Manaraka: Ethyl Acetate （≥99.7%）